Ihe kpatara na ị nweghị ike idetuo Amazon.com | Martech Zone
Ndi otu nkuzi ka na-anwa idobe afọ a South Site South West mmekọrịta (SXSWi) ogbako na Machị. Anyị niile nwere ezigbo ọmarịcha ma mụta ọtụtụ ihe gbasara obodo mmekọrịta yana ihe na-abịa. Enwere ọtụtụ nnọkọ na-atọ ụtọ site na otu panel yana ndị otu Gmail
Isi nri maka Nerds, ọtụtụ n'ime ha na-apụta n'ịntanetị. Achọrọ m ịkọrọ gị otu ọkacha mmasị m.
Na-ekpughe Akụ Akụ sitere na Amazon nke Jared Spool dere
Jared Spool bụ onye ndu ụwa Ahụmịhe Onye Ọrụ, ọkachasị na oghere nyocha ọnụọgụ. Ya na ya na-arụkọ ọrụ Amazon.com ruo ọtụtụ afọ, na-enyocha usoro okporo ụzọ ha ma na-anwa imeziwanye ahụmịhe onye ọrụ nke ndị ahịa Amazon. Okwu ya nwere isi ihe abụọ.
O gosipụtara ihe ndị na-adọrọ mmasị nke Amazon na-eji atụmatụ ọhụrụ wee mejuputa obere mgbanwe iji melite ahụmịhe onye ọrụ.
Ọ tụlekwara na ị gaghị eme otu ihe ahụ dị ka Amazon ma tụọ anya ka ị nwee ihe ịga nke ọma.
Kedu ihe kpatara na anyị niile enweghị ike i copyomi Amazon? N'otu okwu “okporo ụzọ.”
Ndi nleta Amazon nwere 71,431,000 kemgbe December nke 2008. Ha arụọla ndi ahịa 76,000,000 ozi kemgbe ha bidoro. Enwere iwu 24 etinye na sekọnd ọ bụla. Ebe nrụọrụ weebụ gị ọ nwere ụdị nọmba okporo ụzọ ndị ahụ?
Ihe atụ kachasị mma Jared ji eme ihe bụ nyocha onye ọrụ. Imirikiti ndị mmadụ na-achọta nyocha iji nyere gị aka mgbe ịzụrụ ihe n'ịntanetị, na nyocha ndị ọrụ na Amazon bụ ndị a na-ahụkarị. Yabụ kedu ihe kpatara na ịnweghị ike ịgbakwunye nyocha ndị ọrụ na saịtị gị? Jared zoro aka nyocha nke gosipụtara inwe ihe na-erughị nyocha 20 banyere ngwaahịa anaghị enyere ndị mmadụ aka ikpebi ma ngwaahịa ọ bụ ihe ha chọrọ. N'ọnọdụ ụfọdụ ọ na-ebelata nghọta ziri ezi nke ihe ahụ.
Ọ na-aga n'ihu ịkekọrịta na naanị ihe 1 n'ime ndị na-azụ ihe na 1,300 na-ede ederede. Chee echiche banyere ọtụtụ nyocha ị na-ede n'ịntanetị ị dere na ole ị gụrụ. Yabụ iji nweta nyocha iri abụọ ahụ iji nyere aka irere ihe ị ga-achọ ịnweta nde mmadụ 20 zụrụ ihe. Whoa.
Ana m agba gị ume ikiri Ihe ngosi Jared (hụ okpuru). Ọ dị nnọọ nkọ ma dịkwa mfe ige ntị.
M na-agba gị ume ka ị hụ na ị na-emeziwanye ngwaahịa gị n'ịntanetị n'ụzọ na-eme ka uche kachasị maka saịtị gị. Saịtị ọ bụla dị iche, ọ nwere ndị ọrụ dị iche iche yana ndị ọrụ ahụ nwere mkpa dị iche iche. E nweghị anwansi mgbọ atụmatụ maka ịga nke ọma online. Nanị ụzọ iji hụ na ihe ịga nke ọma gị bụ ige ndị ọrụ gị ntị, ma na-emeziwanye ngwa ọrụ ha chọrọ iji mezue ọrụ ha.